Ny fizahantany Bhutan dia manatratra ny Big Apple miaraka amin'ny eTN sy cocktail amin'ny iraka ataon'ny Firenena Mikambana
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Bhutan » Ny fizahantany Bhutan dia manatratra ny Big Apple miaraka amin'ny eTN sy cocktail amin'ny iraka ataon'ny Firenena Mikambana
eTurboNews faly manambara ny fiaraha-miasa nohavaozina amin'ny Fanjakan'i Bhutan. Ny fandraisana cocktail amin'ny iraka ataon'ny Bhutan any New York dia halamina miaraka amin'ny ekipa eTN amin'ny 22 aogositra amin'ny 6:00 hariva.
Mpiasa mpitsangatsangana any New York fitopolo no hanatevin-daharana mpanao gazety mpitety faritany 10, miaraka amin'ny eTN sy Andriamatoa Karma Choeda, Charge d'affaires an'ny Misiona Maharitry ny fanjakan'i Bhutan mankany amin'ny Firenena Mikambana any New York.
Ramatoa Chimmy Pem, talen'ny filankevitry ny fizahan-tany any Bhutan, dia ho any New York hamaly ireo fanontaniana momba an'i Bhutan. Ny mpampiantrano dia Atoa Karma Choeda, tompon'andraikitra amin'ny asa fitoriana maharitra.
Ireo matihanina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny haino aman-jery any New York izay te hanatrika dia afaka misoratra anarana amin'ny etn.travel/bhutan
Hoy Andriamatoa Pem: "Ny governemanta Royal of Bhutan dia manaiky fa ny fizahantany dia afaka manampy amin'ny fampiroboroboana ny fahatakarana eo amin'ny olona sy ny fananganana fifandraisana akaiky amin'ny fisakaizana mifototra amin'ny fankasitrahana sy fanajana ireo kolontsaina sy fomba fiaina samihafa.
“Ny fizahan-tany any Bhutan amin'izao fotoana izao dia orinasa mavitrika tarihan'ny politikam-pitsarana ifotony ny fizahan-tany 'lafo vidy sy misy vokany ambany'. Ny fototry ny politikam-pirenena momba ny fizahan-tany dia ny hampiroborobo ny fizahan-tany amin'ny fomba maharitra izay hanomezana izay ilain'ny mpizahatany sy toerana itodihana ary hiaro sy hanatsara ny fotoana ho avy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fizahan-tany any Bhutan dia miorina amin'ny fitsipiky ny faharetana, midika izany fa ny fizahantany dia tokony ho sariaka amin'ny tontolo iainana sy eo amin'ny tontolo iainana, eken'ny fiaraha-monina sy ny kolontsaina ary azo iainana ara-toekarena. Ity etona ity dia hanohana ny hetsika fizahan-tany rehetra eto amin'ny firenena satria mifanaraka amin'ny hetahetan'ny Fahasambarana Nasionaly.
"Ny fampiharana ny politika dia ho andraikitra iraisana izay mitaky ny fanoloran-tena sy ny fandraisan'anjaran'ny mpandray anjara rehetra ary ny mpitsidika tokoa. Ny fomba fiasa tena tompon'andraikitra toy izany dia tsy hitarika afa-tsy amin'ny fampiasana ny tena tanjon'ny indostrian'ny fizahantany. "
Ny Filan-kevitry ny fizahan-tany any Bhutan dia fikambanana fizahan-tany tampon'ny governemanta voadidy hanara-maso ny fampandrosoana ankapobeny ny fizahantany ao Bhutan. Agence mahaleo tena notarihin'ny praiminisitra izy izay manana solontena ara-drariny avy amin'ny indostrian'ny fanjakana sy ny tsy miankina amin'ny maha mpikambana ao amin'ny filankevitra azy. Ny sasany amin'ireo asany lehibe dia: fanaovana politika, varotra ary fampiroboroboana, fotodrafitrasa sy fampandrosoana ny vokatra ary fanaraha-maso sy fanaraha-maso.
United Airlines: fampivoarana ny asa tamin'ny Jolay 2017
Niorina tamin'ny ensemble fandraisana vahiny Chandiwala faha-16 i New Delhi